Ahoana ny fifandraisan'ny mpampiasa amin'i Pinterest | Martech Zone
Zoma, Febroary 22, 2013 Asabotsy 4 Febroary 2017 Douglas Karr
Nasaina aho tamin'ity herinandro ity mba ho eo amin'ny tontonana miresaka amin'ny famoronana.audio eto) amin'ny fihaonana amin'i Magazine Magazine. Angamba mihoatra noho ny vondrona hafa rehetra, ny creatives dia manana fotoana mety hanararaotana ireo haino aman-jery sosialy toy ny Vine, Instagram or Pinterest.
izany antsipirian'ny torolàlana hita maso ny fomba fifandraisan'ny mpampiasa amin'ny pin, boards, mpampiasa hafa ary marika amin'ny Pinterest. From Wishpond
Ny antontan'isa voalohany tao amin'ny Pinterest dia niresaka momba ny fananganana haingana ataon'ny mpanao asa tanana, ny artista ary ny lamaody. Na izany aza, rehefa nanomboka ny Marketing Infographic sambo, izahay ary gaga amin'ny fifamoivoizana lehibe tohizanay. Pinterest dia sehatra hita maso matanjaka satria tsotra be ny pejy amin'ny alàlan'ny sary an-jatony mandra-pahatongan'ny olona iray mahita ny masonao.
Tags: fifandraisanatombony pinterestPintereststatista pinterest
Haino aman-jery sosialy nohazavaina amin'ny kafe
26 Mey 2013 tamin'ny 2:51 hariva
Te-hanomboka tsy hanonona aho fa mpitsentsitra ny sary-sary aho, mazava ho azy fa hamaky an'ity aho!
Tiako i Pintrest ary amin'ny maha-mpianatra ahy, mpianatra eny amin'ny oniversite dia mandany fotoana kely "manapotra" aho. Amin'ny maha mpianatry ny fifandraisana amin'ny daholobe sy ny dokam-barotra ahy dia tsy afaka ny tsy hahafantatra ny anjara asan'ny Pintrest amin'ny fiatraikan'ny fitondran-tena ny mpanjifa. Heveriko fa ireo tranonkala toa an'i Pintrest dia fomba mamirapiratra hahazoana doka maimaimpoana! Heveriko fa ny ho avy dia fomba famoronana bebe kokoa hamoahana ny dokam-barotra sy ny fanaovana dokambarotra amin'ny fiainam-bahoaka, manodidina ny media sosialy.